Guddi loo magacaabay doorashada guddoonka Aqalka Sare iyo xilliga ay dhici doonto doorashadaas – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Guddi loo magacaabay doorashada guddoonka Aqalka Sare iyo xilliga ay dhici doonto doorashadaas
Waxaa maanta kulankii ugu horeeyay magaalada Muqdisho ku yeeshay xildhibaanada Aqalka sare ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya, iyadoo kulankaasi lagu magacaabay guddiga qaban-qaabada doorashada guddoonka Aqalka sare.
Xildhibaanada Aqalka sare oo haatan tiradooda gaareyso illaa 54 xubnood ayaa waxaa la qorsheeynayaa inay doortaan guddoomiyahooda iyo ku-xigeenada, waxaana guddiga loo magacaabay arrintaasi ay yihiin xildhibaano ka tirsan Aqalka Sare oo kasoo jeeda maamul goboleedyada dalka.
Sidoo kale, guddigaan ayaa qaban-qaanbin doonna doorashada guddoonka Aqalka sare oo lagu wado inay dhawaan ka dhacdo magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya, waxayna xubnaha guddigaasi la magacaabay kala yihiin sida hoose ku xusan:-
1- Prof. Maxamed Cismaan Faarax Dhagajuun – Maamulka Hirshabeele (Waxaa loo doortay guddoomiyaha guddiga)
2- Jawaahir Axmed Cilmi – Maamulka Galmudug.
3- Farxaan Cali Xuseen – Maamulka Puntland.
4- C/laahi Sheekh Ismaaciil Fartaag – Maamulka Jubbaland.
5- C/risaaq Axmed Cali – Maamulka Somaliland.
6- Xuseen Sheekh Maxamuud – Maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya.
Dhinaca kale, guddiga ayaa sheegay in diiwaan gelinta musharixiinta guddoonka Aqalka Sare ay dhici doonto 17-19-ka Janaayo, waxayna doorashada guddoonka sare oo ka kooban guddoomiye iyo laba ku-xigeen ay dhici doontaa 22-ka Janaayo 2017-ka.